Posted by ကြယ်စင်အလင်း at Sunday, August 05, 20122comments
ဘလော့ပေ့ခ်ျ ဖုန်ခါခြင်း... :P
ဘလော့မရေးဖြစ်တာ ၂လတောင်ကျော်သွားပြီ။ ဘာလို့မရေးဖြစ်လဲဆိုတော့ အဓိကဆင်ခြေက ပျင်းနေတယ်လို့
ပြောရမှာပဲ။ ပိုစ့်မတင်ဖြစ်လဲ ဘလော့တွေတော့ဝင်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂လအတွင်း ခရီးကလဲ ၂ခါလောက်
ထွက်ဖြစ်နေတော့ ဘလော့ရေးဖို့အာရုံမရောက်တာလဲပါပါတယ်။ ခုတော့ အချိန်လေးရတုန်း ရေးမယ်ဆိုတော့
ဘာရေးရမလဲမသိဘူး။ ကိုယ့်ဘလော့က ဖုန်တွေတက်နေပြီ။ စီဘောက်စ်ကိုလဲ တော်တော်ရှင်းလိုက်ရ
တယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဒီပို့စ်ကို ဘလော့ ဖုန်ခါခြင်းလို့ပဲ ပေးလိုက်တော့တယ်...း)။
ဇန်န၀ါရီ ၁၄ရက် မြန်မာပြည်ပြန်တယ်။ ကံဆိုးတယ်လို့ပဲပြောရမလားမသိဘူး။ မပြန်ခင် သောကြာနေ့က ၁၃ရက်လူတွေမကြိုက်တဲ့နေ့။ မန်နေဂျာက တစ်ရုံးလုံးကို 5S သန့်ရှင်းရေးအကြီးအကျယ်လုပ်မယ်ဆိုပြီး ကြွေးကြော်တယ်။ရုံးမှာက ယောကျာ်းဆိုလို့ သူရယ် ကိုယ်ရယ် ၂ယောက်ထဲကျန်တော့တာ။ ကိုယ်နဲ့ ကျန်တဲ့ မိန်းကလေးတသိုက်ပဲ ချွေးပြိုက်ပြိုက်ကျအောင် လုပ်။ သူက ကားလေးနဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားသေး။ ဒါတောင် အားဂျန့်အလုပ်ကပေါ်လာသေး။ အဲဒါနဲ့ ငါပဲလုပ်ပေးလိုက်ပါ့မယ် ကျန်တဲ့လူတွေက ဆက်ရှင်းလင်းကြပါစေဆိုပြီး လုပ်တာ ညနေ၅ ခွဲအိမ်ပြန်ချိန်ထိ ချွေးတသီးသီးနဲ့လုပ်။ မနက်ဖြန် မြန်မာပြန်ရမယ့် အပျော်စိတ်လေးတောင်မကပ်အားဘူး။
ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မပြီးသေးဘူး။ ရန်ကုန်ရောက်တော့ လေဆိပ်ကအထွက်၊ သူငယ်ချင်းတွေက လာကြိုပြီး
ဟိုတယ်ကို ကားငှါးစီးသွားတာ။ လှည်းတန်းလမ်းဆုံရောက်တော့ မီးပွိုင့်မိတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း လှည်းတန်းမီးပွိုင့်
မိရင် တရေးတမောအိပ်ပြီးစောင့်နေလို့ရတယ်။ မီးစိမ်းတော့ ကားဆရာက စက်နှိုးတယ်။ မရဘူး။ သူလဲ ကြိုးစား
တယ်။ မရဘူး။ နဲနဲကြာတော့ ဂိတ်က ခေါင်းဖြူတယောက် လာပြီး ဘေးကိုကပ်ထားပေးပါဆိုပြီး လာပြောတယ်။
စက်နှိုးမရတော့ တွန်းရမှာလားဆိုပြီး သူငယ်ချင်းတွေက တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးပြော၊ ရယ်လဲရယ်
ချင်ချင်..း)။ တယောက်ကပြောသေး 'မင်းကွာ တော်တော်ကံကောင်းတဲ့ကောင်၊ ရန်ကုန်ရောက်တာတောင်
နာရီဝက်မရှိသေးဘူး။ ကားတွန်းရပြီ' တဲ့လေ။ သူငယ်ချင်းတွေက ဟားကြ။ ဒါနဲ့ပဲ ကားပြောင်းငှါးလိုက်ရတယ်။
အဲဒီနေ့က ရှိုးစမိုးအပြည့်နဲ့ အထုတ်တွေနဲ့ ကားတွန်းနေတဲ့ လူတသိုက်ကိုလမ်းဆုံမှာတွေ.ခဲ့ရင် ဘယ်သူလဲဆို
တာ သိကြပြီထင်တယ်..း)။ အဲဒီတခုတော့ တော်တော်လေးကိုအမှတ်တရဖြစ်သွားတယ်။ လူတွေက ကွက်ကြည့်
ကွက်ကြည့်နဲ့ ရှက်ရကောင်းမှန်းလဲမသိ။ တယောက်ထဲဆိုရင် ရှက်မိမှာတော့ အမှန်ပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆိုတော့လဲ ခပ်ပြောင်ပြောင်ပဲ။
ရန်ကုန်မပြန်ခင်ကတော့ ဘာတွေစားမယ် ဘာတွေလုပ်မယ်လို့စီစဉ်ထားတာတွေ မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူး။ ပုံလဲ
ကောင်းကောင်းမရိုက်နိုင်ခဲ့။ ကိုယ်ကပဲ အဲလိုအကျင့်မရှိလို့လားမသိဘူး။ ကင်မရာတကိုင်ကိုင်နဲ့ လူတွေကြည့်မှာ
ကို တော်တော်ရှက်တဲ့လူ။ ဒါတောင် ဓနုဖြူဒေါ်စောရီမှာ နေ့လယ်စာစားတုန်း ဓါတ်ပုံရိုက်တာ အပြောခံရသေးတယ်။ မင်းတို့စင်ကာပူကကောင်တွေ ဘာစားစားရိုက်တာပဲလားတဲ့ဗျာ။ စားပွဲထိုးကလဲ ပြုံးစိစိနဲ့
ဆိုတော့ ဆက်မရိုက်ရဲတော့ဘူး။ အင်း.. သူများတွေလို သတ္တိမွေးရဦးမှာပါလား..း)။
မြစ်ကြီးနား ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်။ လူမပါတဲ့ပုံက ခပ်ရှားရှား..ရှိတဲ့ပုံကိုရှာတင်လိုက်ရတယ်..း)။
မြစ်ကြီးနားမြို.ရဲ့ ပင်လယ်ကွေ.ကချင်ရိုးရာထမင်းဆိုင်က ကြက်သားကချင်ချက်။
ဆုတောင်းပြည့်လျောင်းတော်မူဘုရားကြီး။ ဘုရားပုံသန့်သန့်မရှိလို့ လူပါတဲ့ပုံကိုပဲတင်လိုက်တယ်.. ပုဆိုးပြာရှပ်ဖြူဖြူနဲ့က......း)။
ပင်လယ်ကွေ.ဆိုင်ကနေ လှမ်းမြင်ရတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်။ ဆိုင်ရဲ့အောက်မှာ ဟင်းရွက်ခင်းစိုက်ထားတာတွေ.ရတယ်။
သူငယ်ချင်းတယောက်က ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးမယ်ဆိုတာနဲ့ အမှတ်တရ မြစ်ကမ်းမှာရိုက်လိုက်တယ်။ Reflector,
flast light တွေဘာတွေနဲ့ ဟုတ်လို့ပဲ..။။ မော်ဒယ်တွေက ပို့စ်မပေးတတ်၊ အတောင့်လိုက်ကြီးရပ်ပြီ အရိုက်ခံ၊ ကိုယ့်အလည့်သာ ပို့စ်မပေးတတ်တာ၊ တခြားတယောက်အရိုက်ခံတော့ ဘယ်လိုရပ်၊ ဘယ်လိုနေဆိုပြီး ပြောပေးကြနဲ့ တကယ့်ကို အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့တယ်။ reflector ကိုကွယ်ပြီးနေရိပ်ခိုနေကြ
လုိ့ ကင်မရာဆရာက ဟောက်သေး...။ ဒီပုံကိုမတင်နဲ့လို့ အရိုက်ခံနေတဲ့သူငယ်ချင်းကပြောထားတာ.. သူမသိ
နှစ်ကူးတော့ အိမ်မှာ ချက်ဖြစ်တဲ့ဟင်းတမယ်။ ဟင်းလျာကောင်းတမယ်မဟုတ်ပေမယ့် အိမ်သားတွေစုပေါင်း
ချက်တဲ့ ဟင်းပွဲလေးဆိုတော့ အရသာရှိတယ်။ ယူနန်ဖက်က တရုတ်တွေရဲ့အယူ အရတော့ နှစ်ကူးမှာ
အမျိုးသားတွေက မီးဖိုချောင်ဝင်ပြီး ချက်ပြုတ်ရတယ်တဲ့။ အမျိုးသမီးများ မီးဖိုချောင်မ၀င်ရဆိုပဲ။ ခုထိလဲ တချို.နေရာတွေမှာ ကျင့်သုံးနေကြဆဲပါပဲ။ ကျွန်တော့အိမ်မှာတော့ ယောကျာ်းတွေသာ မီးဖိုချောင်ထဲဝင်
ထမင်းချက်ရရင် နှစ်သာကူးပြီးသွားမယ် စားလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။..း)
မြစ်ကြီးနားမှာ ပယင်းလုပ်ငန်းက တော်တော်လေး တွင်ကျယ်နေတယ်။ တရုတ်ပြည်ဖက်ကို ရောင်းကြတယ်။
သူက ကျောက်တမျိုးဆိုပေမယ့် လေးလဲ မလေး။ ကိုယ်နဲ့အတူဆောင်ထားရင် နှလုံး၊ သွေးအတွက် ကောင်းတယ်
လို့ပြောကြတယ်။ များသောအားဖြင့် ရတနာတခုအနေနဲ့ သုံးကြတယ်။ အချွန်နဲ့က အဖေ့လက်ဆောင်။
ငါးကောင် ပုံစံထုဆစ်ထားတာက အကို့ဆီကလက်ဆောင်။ ငါးလို့သာပြောတာ ဘာကောင်နဲ့တူလဲတော့မသိဘူး။
ဒီမှာက မဆွဲဖြစ်တော့ အမှတ်တရအနေနဲ့သိမ်းထားရုံကလွဲပြီး ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။
မြစ်ကြီးနားကထွက်တဲ့ ဆားမုန့်။ေ၇ွှနှင်းဆီက မူလလက်ဟောင်း။ ရင်ရင်က ခေတ်သစ်ဆားမုန့်။ ဘူးလေးနဲ့
ဓါတ်ပုံများများမရှိတော့ ခရီးသွားပို့စ်က အပိုင်းဆက်တွေနဲ့ မရေးနိုင်တော့ဘူး။ နောက်တပို့စ်မှာတော့
Posted by ကြယ်စင်အလင်း at Tuesday, January 31, 20126comments
The Big Picture-2
ဂျာမနီ နိုင်ငံ မြူးနစ်မြို.မှာ စက်တင်ဘာလ နောက်ဆုံးပတ်ကနေ အောက်တိုဘာလ ပထမ ပတ်လောက်ထိ၁၆ - ၁ဂ ရက်ကြာ ကျင်းပတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘီယာပွဲတော် Oktoberfest ကို ဒီနှစ် ၂၀၁၁ မှာတော့ လူပေါင်း၆ သန်းလောက်က တက်ရောက်ဆင်နွဲခဲ့ကြတယ်။ ပွဲတော်ကို ၁၈၁၀ခုနှစ် က စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘီယာကတော့ မြူးနစ်မြို.ဧရိယာအတွင်းက ထုတ်တဲ့ဘီယာပဲ ဖြစ်ရပါမယ်တဲ့။ ကဲ. ဘီယာကြိုက်တဲ့ ဘလော့ဂါတွေ အ၀တ်စလေးအောက်မှာခံပြီး သရေကျသွားပါဦး...း)။
A overall view as revelers attend the last day of the Oktoberfest beer festival at dusk on Oct. 2. (Johannes Simon/Getty Images) #
ပွဲတော်နောက်ဆုံးနေ့ ညနေခင်းမှာ ပါဝင်ဆင်နွဲနေကြတဲ့ လူအုပ်ကြီးပါ။
A young woman drinks beer while wearingafancy Bavarian costume during the last day of Oktoberfest. (Johannes Simon/Getty Images) #
ပါဗာရီယန် ၀တ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့ မိန်းမပျို ဘီယာသောက်နေတဲ့ပုံပါ။
A reveler dressed with traditional Bavarian costume attends the last day of the festival. (Johannes Simon/Getty Images) #
ပါဗာ၇ီယန်ဝတ်စုံနဲ့ ပွဲတက် အမျိုးသားတယောက်။
A crowded beer tent during the opening day of the Oktoberfest 2011 beer festival at Theresienwiese on Sept. 17 in Munich, Germany. The world's biggest beer festival starts Sept. 17 and runs until Oct. 3. (Alexandra Beier/Getty Images) #
လူတွေနဲ့ စည်ကားနေတဲ့ Theresienwiese ကွင်းပြင်က ဘီယာတဲကြီး ကို Oktoberfest 2011 ဖွင့်ပွဲနေ့ကမြင်ရတဲ့ပုံပါ။ ကမ္ဘာအကြီးဆုံး ဘီယာပွဲတော်ကို စက်တင်ဘာ ၁၇ရက်နေ့က အောက်တိုဘာ ၃ရက်နေ့ထိကျင်းပပါတယ်။
Young people lift up their beer steins after the official opening of the famous Bavarian Oktoberfest beer festival inabeer tent in Munich, southern Germany, Sept.17. More than six million guests from around the world are expected to descend on the beer tents of Munich to celebrate Oktoberfest over the next 17 days. Last year's visitors consumed some 7.1 million 2-pint (1-liter) mugs of beer. (Matthias Schrader/Associated Press) #
ဘီယာပွဲတော် ဖွင့်ပွဲအပြီး လူငယ်တသိုက် ဘီယာခွက်နဲ့ ပျော်မြူးနေကြတာပါ။
Visitors stack beer mugs after the opening ceremony of the famous Bavarian Oktoberfest beer festival in Munich, Germany, on Sept.17. (Matthias Schrader/Associated Press) #
Young visitors rest during the opening ceremony of the famous Bavarian Oktoberfest beer festival in Munich Sept.17. (Matthias Schrader/Associated Press) #
Participants of the traditional costume and riflemen's procession during day2of the 2011 Oktoberfest. (Alexandra Beier/Getty Images) #
ပွဲတော် ဒုတိယနေ့ ရိုးရာဝတ်စုံပွဲမှာ ပါဝင်ဆင်နွဲနေသူတွေပါ။
A waitress serves beer mugs inafestival tent at the start of the Oktoberfest beer festival at the Theresienwiese ground on Sept. 17. (Frank Leonhardt/AFP/Getty Images) #
ပွဲတော်အစမှာ ၀န်ထမ်းတယောက် ဘီယာခွက်ပေးနေတဲ့ပုံပါ။
A woman arranges gingerbread hearts inabooth as preparations were under way for the Oktoberfest beer festival at the Theresienwiese fair ground in Munich. (Christof Stache/AFP/Getty Images) #
အမျိုးသမီးတယောက် အသဲပုံ Gingerbread ပြင်ဆင်နေပုံပါ။
Posted by ကြယ်စင်အလင်း at Sunday, November 27, 20115comments
The Big Picture- 1
ခေါင်းစဉ်က Big Picture ဆိုပေမယ့် ဘလော့ဒီဇိုင်းအရပုံကတော့ မကြီးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါမိုင်ကုန်ပဲ..း)။ ကျွန်တော် ဒီကိုလာဘလော့ကို နေ့တိုင်းနီးပါးဝင်ဖတ်ဖြစ်တာကြာပါပြီ။ ခုတလော သူ့ရဲ့ ဘလော့မှာ Phoenix TV ဆိုဒ်က ပုံတွေကို တင်ထားတာကို အမြဲတမ်းလိုလို စောင့်ကြည့်ပါတယ်။ အဲလို ပုံလေးတွေနဲ့ ဘလော့မှာ မျှဝေထား တာကို ကြည့်ရတဲ့ လူတိုင်း ဗဟုသုတရပါတယ်။ အဲဒီ ဓါတ်ပုံပို့စ်တွေကို ဖတ်ရှုရတော့ ကျောင်းတုန်းက ပရောဂျက်တခုလုပ်တဲ့ အခါမှာ အဲလိုပဲ သတင်းမီဒီယာ ဆိုဒ်တွေကနေ ပုံတွေကို ယူသုံးဖြစ်တာကို အမှတ်ရ သွားတယ်။ ဆိုဒ်ကတော့ တချို.တွေ သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ The Big Picture ပါ။ The Big Picture ကနေ ပုံတွေကို ကျွန်တော့ဘလော့မှာလဲ တင်ရင်ကောင်းမလားလုိ့ အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားခဲ့တယ်။ Copy Right နဲ့ ညှိမှာလဲ စိုးရိမ်နေမိတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ပရိတ်သတ်တွေကို မျှဝေချင်တဲ့စိတ်က ဖြစ်နေတော့ တင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဆိုဒ်ရဲ့ FAQ မှာဝင်ကြည့်တော့ ဓါတ်ပုံတွေက Private photographers တွေကတဆင့် ယူထားတဲ့အကြောင်း၊ ကူးယူဖော်ပြချင်ရင် ဓါတ်ပုံဆရာတွေကို ခွင့်တောင်းသင့်ကြောင်း၊ ပုံတွေအောက်မှာလဲ ဘယ်သူရိုက်ထားတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြထားတော့ ယူသုံးခွင့်ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အကယ်၍ copy right ညှိလာခဲ့ရင်တော့ဓါတ်ပုံဆရာတွေဆီက permissionတောင်းပါ့မယ်။ ကျွန်တော့ဘလော့ပေါ်မှာတော့ ပုံတွေကိုresolutionကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်လုိ့ရမှာမဟုတ်ပေမယ့်ဘလော့ဖတ်သူတွေကိုတခုခုများပေးနိုင်ခဲ့မယ်
ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်။ အမှားအယွင်းပါခဲ့ရင် ဝေဖန်ထောက်ပြအကြံပြု ပေးစေလိုပါတယ်။
World population - Where it's thick and where its thin
Motorists packajunction during rush hour in Taipei in 2009. Taiwan's capital is notorious for its traffic jams, even though many motorists choose motorcycles and scooters over cars. United Nations analysts warn that population growth increases pollution, deforestation, and climate change. (Nicky Loh/Reuters)
မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ ထိုင်ပေ(ထိုင်ဝမ်) မြို.ရဲ့ ၂၀၀၉က ပုံပါ။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံဟာမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးနေတတ်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ UN ကနေပြီးတော့ လူဦးရေထူထပ်လာမှုဟာ လေထုညစ်ညမ်းမှု၊ တောပြုန်းမှု၊ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုတွေကို တိုးစေနိုင်တယ်လို့ သတိပေးထားပါတယ်။
A hot summer day in Suining, China, draws hundreds of residents to the swimming pool on July 4, 2010. China has the world's largest population, at 1.3 billion or one out of every five people on Earth. (Reuters)
တရုတ်ပြည် ဆွေနင်းမြို(အဲလိုအသံထွက်တယ်ထင်တာပဲ)ရဲ့ နွေရာသီမှာအပန်းဖြေနေကြတဲ့
ပြည်သူတွေပါ။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ လူဦးရေအထူထပ်ဆုံး နိုင်ငံဆိုတာ အားလုံးလဲသိပြီးမှာပေါ့။
လူ၅ယောက်မှာ ၁ယောက် တရုတ်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Indians gather to get water fromahuge well in the village of Natwarghad in the western state of Gujarat in 2003. Although its population growth has slowed in the past quarter century, India still has the second-highest population, at 1.19 billion, with three births for every death. (Amit Dave/Reuters) #
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အနောက်ဖက်ပြည်နယ် Gujarat( ဂူဂျာရပ်) ရဲ့ Natwarghad (နပ်ဝါဂပ်) ရွာလေးမှာ ပြည်သူတွေရေတွင်းထဲက ရေကိုခပ်ယူနေကြတဲ့ ပုံပါ။ အိန္ဒိယဟာ လူဦးရေ တိုးပွါးနှုန်း လျော့ကျသွားပေမယ့်ကမ္ဘာ့ဒုတိယ လူဦးရေအများဆုံး ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။ လူ ၁ယောက် သေဆုံးမှုက ကလေး ၃ယောက် မွေးဖွါးနှုန်းနဲ့ညီမျှပါတယ်တဲ့။
The facade of an apartment building in Shanghai, one of China's fastest-growing urban areas. The city has about 23 million people, or the equivalent of the eight biggest cities in the United States combined. (Reuters)
ရှန်ဟိုင်းက တိုက်တခုရဲ့ အရှေ့ဖက်ပုံပါ။ လူဦးရေ ၂၃သန်းရှိပါတယ်။ ဒီပမာဏဟာအမေရိက အကြီးဆုံး မြို.၈ ခု ပေါင်းစပ်ထားတာနဲ့ ညီမျှပါတယ်။
Cars crossastreet in Mong Kok district in Hong Kong last month. Mong Kok has the highest population density in the world, with 130,000 in one square kilometer. (Bobby Yip/Reuters) #
ဟောင်ကောင်ရဲ့ Mong Kok ခရိုင် လမ်းမတခုမှာ ကားဖြတ်သွားတာပါ။ Mong Kok ဟာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေအသိပ်သည်းဆုံး နေရာတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဧရိယာ ၁ စတုရမ်း ကီလိုမီတာမှာ ၁၃၀၀၀၀ နေထိုင်ကြပါတယ်။
Ulan Bator is the capital of Mongolia, the world's least densely populated country. It has 2.7 million people spread across an area three times the size of France, two-fifths in rural areas on wind-swept steppes. (Carlos Barria/Reuters) #
မွန်ဂိုလီရား ရဲ့ မြို.တော် Ulan Bator ဟာ ကမ္ဘာလူဦးရေ သိပ်သည်းဆအနဲဆုံးမြို.ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံဧရိယာ ထက် ၃ ဆကြီးတဲ့ မြို.မှာ ၂.၇ သန်းသာ နေထိုင်ကြပါတယ်။အဲဒီမှာ ၅ ပုံ ၂ပုံက သစ်ပင်နဲပါးတဲ့ လွင်ပြင် ကျယ်ကြီးမှာ နေထိုင်ကြပါတယ်။
Jugderdem, 2, stands at the door ofatraditional Mongolian yurt in Shivert, about 140 miles northeast of Ulan Bator. (Carlos Barria/Reuters) #
အသက် ၂နှစ်အရွယ် Jugderdem ဆိုတဲ့ ကလေးတယောက် မွန်ဂိုလူမျိုးတွေရဲ့ ရွက်ဖျင်တဲတံခါးနားမှာ ရပ်နေတာပါ။ Shivert ရွာကတော့ Ulan Bator ရဲ့ အရှေ့မြောက်ဖက် မိုင် ၁၄၀ အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။
A combination picture shows 28 of the wives of Ziona, the head ofareligious sect called "Chana," which allows polygamy and was founded by Ziona's father in 1942. Ziona has 39 wives, 94 children and 33 grandchildren. He lives in his4story 100-room house with 181 members of his family. (Adnan Abidi/Reuters) #
Ziona ဆိုတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ ၂၈ ယောက်သော မိန်းမတွေရဲ့ပုံပါ။ Ziona ဟာ Chana လို့ခေါ်တဲ့ ဘာသာရေးအသင်းတခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက်ပါ။ သူ.မှာ ဇနီးမယား ၃၉ယောက်၊ သားသမီး ၉၄ ယောက်နဲ့ မြေး ၃၃ယောက်ရှိပါတယ်တဲ့။ အခန်းပေါင်း ၁၀၀ ရှိတဲ့ ၄ထပ်အိမ်ကြီးမှာ ၁၈၁ယောက်သော အိမ်သားနဲ့ နေထိုင်တယ်တဲ့ဗျာ။ (ရွာ တရွာ တည်ထောင်လို့ရလောက်တယ်.အံ့ပါရဲ့။ )
Ziona, 67, takesabreak at the construction site ofachurch in Baktawng village in the northeastern Indian state of Mizoram, Oct. 5, 2011. (Adnan Abidi/Reuters) #
၆၇ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့Ziona ခဏအနားယူနေတဲ့ပုံပါ။ (မိန်းမတွေများလွန်းလို့ထင်တယ်။
Ziona's4story house in Baktawng village where he lives with 181 members of his family, Oct. 6, 2011. (Adnan Abidi/Reuters) #
Ziona ရဲ့ ၄ထပ်အဆောက်အအုံ။ Baktawng ရွာမှာ တည်ရှိပါတယ်။
A wife of Ziona prepares breakfast at their residence, Oct. 5, 2011. Meal preparation isahuge undertaking. (Adnan Abidi/Reuters) #
Ziona ရဲ့ ဇနီးတယောက် သူ့အိမ်သားတွေအတွက် မနက်စာပြင်ဆင်နေတဲ့ပုံပါ။
Laundry hangs out to dry on the roof of Ziona's residence, Oct. 6, 2011. (Adnan Abidi/Reuters) #
အိမ်ရဲ့ ခေါင်မိုးမှာ အ၀တ်လှန်းနေတာပါ။
Family members of Ziona pose for group photograph outside their residence, October 7, 2011. (Adnan Abidi/Reuters) #
Ziona ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ စုပေါင်းပုံ ရိုက်နေကြတာ။ ( ကဲ အားမကျဘူးလား အဲလို ဆွေကြီးမျိုးကြီးကို....း)။
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော်ဟာ ဘာသာပြန်တယောက် မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အတိအကျမပြန်နိုင်တာကို
နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဘာသာပြန် မှားယွင်းနေခဲ့ရင် ထောက်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။
Posted by ကြယ်စင်အလင်း at Friday, November 25, 20113comments
ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်ရင် ဒီPeppermint Gel ကိုသုံးကြနော်
ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက်တတ်တဲ့ ဘလော့ဂါ ဦးဦး၊ ဒေါ်ဒေါ်၊ ကိုကို၊ မမ များ ဒီ ပရုတ်ဂျဲလ်လေးကို ဆောင်ထားကြနော်။
Posted by ကြယ်စင်အလင်း at Thursday, November 24, 2011 1 comments
မနေ့က ဖေ့ဘွတ်မှာ မြန်မာပြည်က အဆိုတော်မတယောက်ရဲ့ အင်တာဗျူးအကြောင်းဖတ်လိုက်ရတယ်။
ဘာတွေ ပြောသွားမှန်းကို မသိဘူး။ ပြည်သူတွေက အဆိုတော်တယောက်ကို လက်မခံနိုင်တာနဲ့ပဲ ဟိုမရောက်
ဒီမရောက် လူတန်းစားရောက်သွားပါရောလား။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကဗျာတပုဒ် ထွက်လာသေးတယ်။
ကဗျာကို ကြိုက်လို့ ဘလော့မှာရှယ်လိုက်တယ်။း) ပုံကိုလဲ ရှားရှားပါးပါးရှာပြီး တွဲတင်နိုင်ကြတယ်။း)
ကြွားချက်ကတော့9လောက်ရှိတယ်
မောင်တို့ဆိုစေ ပျားသကာသို့ ချိုလှစေ..တဲ့
အောက်ပုံက သူ့အင်တာဗျူးပါ။ ပညာတတ်ပါးစပ်ကလဲ ဒီလိုစကားတွေပြောထွက်ပါလားနော်။
Posted by ကြယ်စင်အလင်း at Saturday, November 12, 20117comments
မနေ့ညက အင်တာနက်ထဲ ဟိုဒီကြည့်ရင်းနဲ့ စင်ကာပူဆိုဒ် Great Deal မှာ စိတ်ဝင်စားစရာပရိုမိုးရှင်းတွေရှိလိုရှိငြား ရှာကြည့်ရင်းနဲ့Converse(အောစတား)က Warehouse ဈေး ၂-၇ ရက်နေ့ထိ ရှိတယ်လို့တွေ.လိုက်တော့.. ဟိုက်မနေ့ကမှ ရန်ကုန်ကသူငယ်ချင်းတယောက်က သူအောစတားဖိနပ်မှာမယ်တဲ့။ ကိုယ်ကပြောလိုက်သေးတယ်.. မင်းမှာချင်ရင် ဒီဇင်ဘာမှာ ၀ယ်ပေးမယ်။ အဲဒီချိန် လျှော့ဈေးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့သေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉တုန်းက ဒီဇင်ဘာမှာရှိတယ်လို့ပဲမှတ်ထားတော့ ဒီတခေါက်လဲ အဲချိန်လောက်ပဲ ဖြစ်မှာပါဆိုပြီး သူ့ကို ဖိနပ်ဆိုဒ်တွေ အရောင်တွေကြည့်ထား၊ငါ့ကိုပုံပို့ပေးလို့ ပြောခဲ့တာ။ ပြောတာတောင်နောက်ကျသွားပြီ။ ဒါနဲ့ပဲ မဖြစ်ဘူး။ သွားကြည့်ဦးမှဆိုပြီး နောက်နေ့မနေ့ထွက်လာခဲ့တယ်။ အရင်တုန်းကလဲ သွားဖူးပြီးသားဆိုတော့နေရာကိုရှာရတာ မခက်တော့ဘူး။ ပထမတခေါက်တုန်းကတော့ လမ်းကြားတွေထဲဝင်ရတာ မျက်စိလည်လမ်းမှားသေးတယ်။ အဲဒီနားကTai Seng ဘူတာလဲဖွင့်လိုက်တော့သွားရတာလွယ်ကူသွားတယ်။ အဲဒါနဲ့မနက် ၁၁ကျော်လောက်ရောက်သွားတော့ မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ အလမား.. ခြဲထဲဝင်ရဖို့စောင့်နေတဲ့လူတန်းကြီးက ခြံထောင့်ထိကွေ.ပတ်နေတာ။ ကိုယ်လိုချင်တာပိုက်ဆံပေးပြီးဝယ်ဖို့အရေးတန်းစီတောင်စောင့်ရသေးတယ်ဆိုတော့နဂိုက စောင့်ဆိုင်းရတဲ့အလုပ်ကို မုန်းတဲ့လူနဲ့လာတိုးနေတယ်။ ရောက်တော့မှ မထူးပါဘူးလေဆိုပြီး လူတန်းနောက်မှာ စီနေလိုက်တယ်။
၀င်ပေါက်နားရောက်ခါနီး ရိုက်ထားတာ။ ၁ခု ၁၀၊ ၁ခု ၁၀ လို့အော်မယ့်လူတော့မရှိပါဘူး။
ဒီလျှော့ဈေးပွဲလာတိုင်း ခြေထောက်ညောင်း၊ ချွေးထွက်၊ ဖုန်းဘက်ထရီကုန်(အိမ်သားတွေကို ဘာအရောင်ဝယ်ရမလဲ ဘာညာဖုန်းဆက်ရတာတကြောင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေကလဲ သူတို့လာနေပြီ၊ ဘယ်မှာလဲ၊ ဘာညာဆက်၊အဲဒါကြောင့်ဘက်ထရီကုန်တာ)၊ ငွေကုန်တာတော့မပြောတော့ပါဘူး။ ငွေကုန်ဖို့လာတာပဲလေ..း)။
မသိရင်လျှော်မယ့်ခြင်းတောင်းထဲကအ၀တ်တွေလိုပါပဲ။ ဒီလိုပဲ ရှော့ပင်းရပါတယ်။ တော်တော်ပင်ပန်းပါတယ်..းP
တနေကုန် ဟိုဖိနပ်ပုံထဲဝင်တိုး၊ ဒီအ၀တ်ပုံထဲဝင်တိုး မွှေနောက်ရှာဖွေတော့ နောက်ဆုံး ဒါလေးတွေရပါတယ်။ လူလဲတော်တော်ကိုဖတ်ဖတ်မောသွားပါတယ်။ထမင်းမစားဘာမစားနဲ့ကြိုးစားရှာတာ။ ကျောင်းစာ၊အလုပ်တွေကို အဲလိုထမင်းမစား၊ရေမသောက်ပဲနဲ့၎ ၅ နာရီကြာအောင်မလုပ်ဖူးဘူး။ကြွားတယ်ထင်လဲ ထင်ပါစေတော့။ ပုံပုံကရလာတာဆိုတော့ဈေးက၃၀ထက်မပိုတဲ့ဟာတွေ။ဒီဟာတွေရဖို့မနဲကြိုးစားရှာဖွေရတာကိုက ကျေနပ်စရာပဲ။ အကုန်လုံးက တကယ်လိုချင်နေတဲ့အရာတွေ။ အပြင်မှာက ဒီဈေးနဲ့မရနိုင်တော့ ပင်ပန်းခံရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ဒီ Converse ဈေးကို ရွှေမြန်မာတွေနဲ့ ဖဦးထုပ်တွေသိတာ ပိုများသလိုပဲ။ လာသမျှလူတွေကမြန်မာနဲ့ဖဦးထုပ်က ခပ်များများ။ ဒို့ရွှေမြန်မာတွေလဲ ၀ယ်နိုင်သုံးနိုင်တာကို ကြည့်ပြီး ၀မ်းသာသွားပါတယ်။..ဘာမှမဆိုင်သလိုပဲ..ဟီး။
စင်ကာပူမှ လူများသွားချင်ရင် အမြန်သွားကြပါ။ ၂ ရက်ကျန်ပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံးနေ့တွေက လက်ကျန်တွေပဲရှိတော့မှာပါ။ ဒီလင့်မှာ အသေးစိတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by ကြယ်စင်အလင်း at Saturday, November 05, 20114comments